काठमाडौंमा जग्गाको मूल्य ४ गुणासम्म बढ्यो ! | Hakahaki
काठमाडौंमा जग्गाको मूल्य ४ गुणासम्म बढ्यो !
२ साउन, काठमाडौं । काठमाडौंका स्थानीयले तिर्ने घर जग्गा कर रकममा काठमाडौं महानगरपालिकाले घरजग्गाको मूल्यांकन रकममा वृद्धि गरेसँगै वद्धि भएको छ ।
महानगरपालिको आर्थिक ऐन-२०७४ मार्फत जग्गाको मूल्याकंन ४ गुणासम्म बढाइएको छ । योसँगै धेरै जमिन भएका काठमाडौंका स्थानीयले तिर्ने कर पनि चार गुणासम्म बढ्ने देखिएको छ ।
महानगरपालिको प्रतिरोपनी ३० लाखसम्मको मूल्यांकन भएका जग्गाको वाषिर्क ५ सयसहित विपद ब्यवस्थापनबापत ६ सय रुपैयाँ तय गरिएको छ । त्यसबाट मूल्याकंन बढ्दै जाँदा करको भार पनि थपिँदै जाने गरी तय गरिएको छ ।
घर जग्गा मुल्यांकनको लागि जग्गाको क्षेत्रफल आठ आनासम्म भएमा सम्पुर्ण जग्गा घरजग्गा कर निर्धारणमा समाबेश गर्ने सो भन्दा बढी क्षेत्रफल भएकाको हकमा भवन वा घरले चर्चेको क्षेत्रफल एफएआर को दुई गुणा सम्मको जग्गा मात्र मूल्यांकनमा समाबेश गरी कर निर्धारण गरिने भएको छ ।
सडकले नछोएका, एक दशमलव पाँच मिटरसम्म चौंडा बाटोले छोएका भवन, घर, टहरा वा जुनसुकैै भौतिक संरचना रहेको जग्गाको मुल्यमा बीस प्रतिशत छुट गरिने भएको छ ।
आठ मिटर भन्दा माथि जतिसुकै चौडा बाटोले छोएका भवन, घर, टहरा वा जुनसुकै भौतिक संरचना रहेको जग्गाको मूल्यमा छुट हुने छैन । भवन निर्माणको स्थलगत अवस्थालाई आधार मानि घरजग्गा कर निर्धारण गरिने ऐनमा जनाइएको छ ।